အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ
ဗြိတိန်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် ယခင်တရားဝင်ပြုလုပ်မည့်အချိန်ထက် သုံးနှစ်စောပြီး ပြုလုပ်မျာဖြစ်ပါသည်။ ၀န်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေအနေနှင့် ယခုကဲ့သို့ စောစီးစွာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးဖို့ပြုလုပ်ခဲ့တာသည် ယူရိုဇုန်အဖွဲ့မှခွဲထွက်မည့်အစီအစဉ်ကို ပိုမိုထောက်ခံမှုအားကောင်းလာစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ သဘောထားစစ်တမ်းတွေအရ ထရီဇာမေ၏ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီက ပြိုင်ဘက်အလုပ်သမားပါတီထက် ပိုမိုလူကြိုက်များပြီး အပြတ်အသတ်ဦးဆောင်နေသည်ဟု သိရှိရပါသည်။.
ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀န်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေ၏ပါတီသည် လူထုထောက်ခံမှုအားကောင်းပြီး အနိုင်ရရှိခဲ့ပါက စတာလင်ပေါင် အားကောင်းနိုင်ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပဲေ၇ွးကောက်ပွဲဆိုတာမျိုးက မသေချာမရေရာမှုတွေများတာကြောင့် ၀န်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေအပေါ်ထောက်ခံမှု လျော့ကျလာပါက ပေါင်စတာလင်ငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။.
ဇွန်လ ၉ရက်နေ့မှ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်မှာ ပေါင်စတာလင်တန်ဖိုးမြင့်တက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထား ကြပါသည်။.